News - The atụmanya mmepe nke kraft akwụkwọ akpa
Akpa akwụkwọ Kraft na-adabere na akwụkwọ osisi pulp, agba na-ekewa n'ime akwụkwọ kraft na-acha ọcha na akwụkwọ na-acha odo odo, nwere ike iji ihe mpempe akwụkwọ na akwụkwọ ahụ na ihe nkiri nke ihe nkiri, mmetụta mmiri na-adịghị, akpa ike nwere ike ime dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si otu okpukpu isii, obibi na ntinye akpa. E kewara usoro ịsaghe oghe na nke mgbachi n'ime akara okpomọkụ, akara akwụkwọ na ọdọ mmiri.
"Akpa akwụkwọ Kraft" bụ akpa ejiri ihe mejupụtara. N'ihi njirimara na-adịghị egbu egbu, nke na-enweghị isi na nke gburugburu ebe obibi nke ihe eji emepụta akpa akwụkwọ kraft, “akpa akwụkwọ kraft” abụrụla ngwaahịa mba ụwa mara maka nchekwa gburugburu ebe obibi ma na-eju afọ ndụ ndị mmadụ. A na-ahụ "akpa akwụkwọ kraft" ebe niile na nnukwu ụlọ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa n'ụlọ na mba ofesi. Ọ dị ka obere onye agha, soro anyị na-adị kwa ụbọchị ma na-enyere anyị aka ịkekọrịta ibu nke ndụ.
Amamịghe nke ndi mmadu nwere ike zuta dika otutu ihe ha nwere ike iburu bu ihe ojoo site na nbata nke kraft paper bag mejuputara, nke mere ka otutu ndi ahia ghara ichegbu onwe ha banyere ihe ha na-apughi imebi ahia ha. Ọ bụrụ na ọmụmụ nke kraft akwụkwọ mejupụtara akpa akwalite mmepe nke dum mkpọsa ụlọ ọrụ, ikekwe ụfọdụ ikwubiga okwu ókè, ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ kpughere a onu ka azụmahịa, ya bụ, na ndị ahịa ịzụ ahịa ahụmahụ na-kasị ukwuu ogo nke nọrọ jụụ, adaba, nke ọma tupu, enweghị ike ịkọ ọtụtụ ihe ndị ahịa ga-azụ. Ọ bụ kpọmkwem n'ihi nke a, mere ka ndị mmadụ mechara leba anya na ahụmịhe ịzụ ahịa nke ndị ahịa, ma kwalite mmepe nke ịzụ ahịa na nkata na nnukwu ụlọ ahịa ahụ ma emechaa.
N'ime ọkara narị afọ sochirinụ, mmepe nke akpa ịzụ ahịa akwụkwọ kraft dị mma. Ndozi nke ogo ihe emeela ka ikike ya bukwuo ibu ma mee ka ọdịdị ya dịkwuo mma. Ndị na-emepụta akwụkwọ ebipụtala ụdị ụghalaahịa niile na usoro ọmarịcha na akpa akwụkwọ wee banye n'ụlọ ahịa na ụlọ ahịa na n'okporo ụzọ azụmahịa. Ruo mgbe etiti narị afọ nke 20, ntoputa nke plastic shopping akpa ghọrọ a isi mgbanwe na akụkọ ihe mere eme nke ịzụ ahịa akpa. Plastic shopping akpa site na nke ya ala price, siri ike mma, mkpa na ìhè uru mgbe na-akparaghị ókè mma kraft akwụkwọ onyinye bag nkedo ndo. Kemgbe ahụ, akpa rọba abụrụla nhọrọ mbụ nke ndụ, eriri ehi ji nke nta nke nta bụrụ "akara nke abụọ". N'ikpeazụ, enwere ike iji akpa akwụkwọ kraft na obere akwụkwọ, uwe, na ngwaahịa vidiyo na aha "gburugburu", "eke" na "nostalgic".